Websiteyada warxumo tashiilka ah iyo wadaniga Soomaaliyeed maxaa kala haysta? |
Websiteyada warxumo tashiilka ah iyo wadaniga Soomaaliyeed maxaa kala haysta?
Waxaa soo kordhay websiteyo ay adeegsadaan dadka warxumo-tashiilka ah oo qora warar aan raad lahayn oo lagu bahdilayo dadka wadaninimada ku sifoobay oo dalkoodi u soo hiloobay waxna raba in ay u qabtaan.
Shaley ayaan akhriyay qodob ay qoreen www.coomaad iyo www.camaloow.com buy Brand Cialis, cheap lioresal. (ninkii dhaqaalaha ku bixin jiray dagaaladi Deefow).
Waxaan ku noolahay dibedda waqtigaan xaadirka ah,waxaanan aad u jeclaan laha in aan maanta joogo Beletweyne oo ah meeshaan ku dhashay oo la leeyahay waxaa yimid ninkii dhaqaalaha
dagaaladi Deefow bixin jiray.